रोचक Archives · sankhuwasavaonline
एजेन्सी । एउटा भारतीय पत्रिको कभर पृष्ठमा छापिएको मोडलको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । बच्चालाई निवस्त्र स्तनपान गराइरहेको एउटा भारतीय मोडलको फोटोले सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गरेको छ । तस्वीरलाईको विषयलाई लिएर थुप्रै टिकाटिप्पणी उठिरहेका छन् । केरलाबाट प्रकाशित ‘घरलक्ष्मी’ पत्रिकाको कभरमा मोडेल गिलु जोसफले आफ्नो छातीमा बच्चालाई दूध चुसाएको देखाउँदै क्यामरा...
यो कथा टिजियाना कैटोनको हो, जसले सेक्स भिडियो भाइरल भएका कारण आत्महत्या गरिन् । अप्रिल २०१५ मा नेपल्सको उपमहानगरिय मुग्नानो क्षेत्रमा बस्ने ३१ वर्षीया टिजियानाले ह्वाट्सएपमा पाँच जनालाई सेक्स भिडियो पठाइन् । जुनजुन मानिसहरूले यो भिडियो ह्वाट्सएपमा रिसिभ गरे तिनीमध्ये उनको ब्वाइफ्रेन्ड सर्गियो डी पालो पनि थियो, जससँग उनको सम्बन्ध स्थिर थिएन । त्यो भिडियो टिजियानाले कुनै...
ब्लड ग्रुपले स्वास्थ्य अवस्थाको मात्रै होइन मानिसको स्वभावको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । क्यानेडियन नेचुरोपेथिक डाक्टर जेम्स डी एडमाओ र उनका छोरा पिटर डी एडमाओले गरेको अध्ययन अनुसार ब्लड ग्रुपमार्फत व्यक्तिको स्वभाव बारेमा समेत जानकारी दिन सकिन्छ । ब्लड ग्रुपले मानिसको व्यक्तित्व, काम, रोजाई र जीवनसँग सम्बन्धित जानकारी पनि दिन्छ । जस्तै प्र...
जकार्ता। विभिन्न मुलुकमा सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछन् । सुन्दरताका लागि कयौंले निकै मेहनत र खर्चसमेत गर्दछन् तर डेनी क्वान यस्ती अभागी भइन् जो सुन्दरताकै कारण सरकारबाट प्रतिबन्ध झेलिरहेकी छन् । डेनी क्वान कम्बोडियाकी नायिका हुन् । गत वर्ष अप्रिलमा त्यहाँको सरकारलाई उनलाई एक वर्षसम्म नयाँ चलचित्रमा अभिनय गर्न रोक लगाएको थियो । आवश्यकताभन्दा बढी कामुक भएको भन्दै उनलाई सरक...
विवाहले वरवधू मात्र नभई दुई परिवारबीचको सम्बन्ध मजबूत बनाउँछ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ ।आजकल यो परम्पराको पालन मानिसले गर्दैनन् तर धर्मग्रन्थहरूमा सहगोत्री विवाहलाई निषेध गरिएको छ । अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिलाई जेनेटिक रोग नलागोस् भनी सेपरेसन अफ जीन्स अर्थात् नजिकैको नातेदारसँग विवाह गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नातेदारहरूमा जीन सेपरेसन अर्थात्...
एजेन्सी । युवा–युवतीबीच अहिले डेटिङ्गको खुब चलन बढेको छ । विभिन्न सुन्दर ठाउँहरुमा प्रेमलाप गर्दै रमाउने युवा जमात बढिरहेको छ । अहिले एउटा भिडियोले सनसनी मच्याएको छ । भिडियोमा एक मस्त जवान युवती छिन् । सेतो टिसर्ट र पाइन्ट लगाएकी ती युवतीले एक नव जवान युवालाई कुटिरहेकी छिन् । केटा आफ्नो बचाउको लागि अनुहार लुकाइरहेका छन् । तर, उनीहरुलाई भिडले घेरेका छन् । सबैले मोवाइलमा यो नौ...
यदि सर्पले तपाइँलाई डस्यो भने के गर्नुहुन्छ ? आफ्नो उपचार गर्नेतर्फ लाग्नुहुन्छ र रिसको झोँकमा सर्पलाई मार्नुहुन्छ पनि होला । तर भारतका एकजना व्यक्तिले चाहीँ आफुलाई डस्ने सर्पको टाउको चपाइदिएर बदला लिएका छन् । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित हर्दोइका बासिन्दा सोनेलालले आफूलाई सर्पले टोकेपछि बदलास्वरुप सर्पको टाउको टोकेर छिनालिदिएको बताए । सर्पको टाउको छपाइदिएर मारेपछि बेहोस भएक...
संसारकै सर्वाधिक धनी कुखुरो: सुनको ओछ्यानमा सुत्छ , नोकरचाकरको स्याहारसुसारमा रहन्छ
बेलायतमा यस्तो कुखुरा छ, जुन कुखुराको सम्पत्ती एक करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । याे कुखुराेकाे सम्पत्ति कयाैँ अमेरिकी नागरिककाे भन्दा धेरै रहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । गिगु नाम गरेको उक्त कुखुराको जीवनशैली पनि कुनै राजाको भन्दा कम छैन् । कुखुरा सुनको ओछ्यानमा सुत्ने, महँगो गाडीमा सवार हुने, भान्छेले पकाएको मीठोमसिनो खाने र नोकरचाकरको स्याहारसुसारमा रहने ग...
अनौठो चलन : भाडामा बेहुला र जन्ती लिएर बिहे !
एजेन्सी । भियतनाममा भाडामा बेहुला र जन्ती लिएर बिहे गर्ने प्रचलन बढ्न थालेको छ । भियतनाममा ‘लिभ इन रिलेशनसीप’ को प्रचलन बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कयौं युवती विवाह विना नै गर्भवती हुने गरेका छन् । सामाजिक तिरस्कारबाट जोगिनका लागि त्यस्ता युवतीले नक्कली विवाह गर्न थालेका हुन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार राजधानी हनोइसमेत विभिन्न सहरमा नक्कली विवाहको प्रचलन बढ्न थालेको छ...
कारभित्र यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै मृत्यु
पश्चिम जर्मनको सहर बोटरोपमा ३९ वर्षे पुरुष र ४४ वर्षे महिला यौन सम्पर्क गर्दागर्दै मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । कारमा नग्न अवस्थामा मृत फेला परेकाउनीहरु यौन सम्पर्क गर्दा मरेको आशंका प्रहरीको छ । उनीहरुलाई बोटरोपको बन्द ग्यारेजमा फेला पारिएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुले यौन सम्पर्क गर्दा आफूहरुलाई न्यानो पार्न कारको इन्जिन खुला राखेका थिए । न्यानो...